Archive du 20170221
Fitondran'ny HVM Fanjakan-jiolahy
Telo taona mahery kely izay no nitondran�ny fanjakana HVM an�i Madagasikara. Telo 3 taona vao mainka nampihemotra sy nampikorosy fahana ny firenena.
Fitsarana an'i Lylison Ara-dal�na tsara, hoy ny minisitra
Manoloana ny didim-pitsarana nivoaka ny 14 febroary, manameloka ny loholona Lylison higadra an-tranomaizina 1 taona sazy mihatra
Fifidianana 2018 37,5 miliara Ariary no ilaina
Tontosa omaly tolakandro teny amin�ny foiben�ny Vaomiera mahaleotena mpikarakara ny fifidianana (CENI) eny Alarobia ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa ho fanohanana ireo fifidianana eto
Mahafaly Olivier Halefa ambasadaoro any Frantsa ?
Hahatratra ny faherintaonany amin�ny aprily 2017 sa ho rava alohan�izay ny governemanta Solonandrasana Mahafaly Olivier ? Re miverimberina tato ho ato mantsy ny hanovana io governemanta am-perinasa io.
Tiako I Madagasikara Hitantana indray ny firenena amin�ny 2018
Tontosa ny alahady 19 febroary 2017 ny fifampiarahabana ny taona vaovao 2017 ho an�ny vehivavy Tiako I Madagasikara boriborintany faha-6. Nahatonga solontena avokoa ireo mpikambana avy amin�ny FOKOTIM 31 izay nanodidina ny 250.
Efa mandeha ny fanadihadiana�
Salama tsara ve ry Jean a ! Ahoana indray ity aferan-dry lava orona mifampitifitra eto amin�ny tan�na ity ?
Zon�ny mpiasa ECD Hiara-kiasa ny CNaPS sy ny fanjakana
Ho antsika eto Madagasikara dia ny CNaPS no napetraky ny lal�na miahy ny Fiahiana ara-tsosialin�ny mpiasa amin�ny sehatra tsy miankina sy ireo mpiasa ECD
CLD Ambohidratrimo Notsinjaraina tamin�ny kaominina 12
Tapaky ny fivoriamben�ny komity ifotony misahana ny fampandrosoana eo anivon�ny distrikan�Ambohidratrimo ny fitsinjarana ilay tetibola 200 tapitrisa ariary amin�ireo kaominina 12 isan-taona.
Antananarivo Atsimondrano Tanimbary an-jatony hektara difotry ny rano
Velaran-tany maromaro no dibodrano amin�iny Distrika Antananarivo Atsimondrano iny, taorian�ny orana nisesy ny faran�ny herinandro teo.
CENTRE VONJY -BEFELATANANA 84 taona no zokiny indrindra tamin�ireo voaolana
84 taona no zokiny indrindra amin�ireo olona voaolana tonga manatona ny Centre Vonjy etsy amin�ny hopitaly Befelatanana, hoy ny Commandant Andrianirina Jean Paul, tamin�ny mpanao gazety omaly.
"Bus Intelligent" Mbola mila fanofanana ny mpamily
Naneho ny heviny mikasika ilay �bus intelligent� kasain�ny fanjakana hampiasaina eto an-drenivohitra sy ny manodidina omaly Andriamatoa Maradonna, filohan�ny koperativa Contrasmar mampitohy an�Anosy sy Vontovorona.
BNI MADAGASCAR Vonona ny hanohana ireo mpandraharaha ara-toekarena rehetra
Banky iray anisan�ny manohana hatrany ireo karazana hetsika ara-toekarena tanterahina eto amintsika ny banky BNI Madagascar entina hampandrosoana ny firenena.
Mila miala sasatra
Tsy moramora ny mitondra firenena. Ekena tokoa izany. Na mety na tsy mety ny rafitra apetraka dia mitombina foana io teny io.